Home > Products > 200-480Vac High Voltage Input LED Treiber > Linear Aluminium IP67 480V Input LED Treiber > 480V LED Driver UL listed
Fahold dia manolotra fiarandalamby goavana LED manomboka amin'ny 40W hatramin'ny 240W izay miasa avy amin'ny mainty 347Vac any Canada ary ny mainty 480VAC any Etazonia. Ireo mpamily ireo dia manome fahafaha-manao sy fahaiza-manao ho an'ny tetikasa amin'ny safidy maromaro ho an'ny fanaraha-maso mahaleotena, safidin-tsimiafina maro ary endrika hafa. Amin'ny alàlan'ny andiam-pitaovana tsy tapaka sy maharitra 347Vac ary 480Vac, dia azo antoka fa manana ny mpamily mila mahafeno ireo fangatahana samihafa isika.
Ireo vahaolana momba ny tontolo iainana mifamatotra amin'ny tontolo iainana dia mampihena ny vidiny amin'ny alàlan'ny fampihenana ny saram-pandraharahana mifandraika amin'ny fanoloana lamosina mahazatra ary mitohy ny saram-piantohana tsy ilaina. Tena mampihena na manafoana ny faktioran-dry zareo manontolo. Tsy misy fandaniam-bola be loatra, fandaniana fitrandrahana, na saram-pamokarana mahery vaika ataon'ny elektrôna satria ireto rafitra ireto dia mety ho ambany noho ny vidin'ny sisin-tany mahazatra nentim-paharazana. Ny fitaovan'ny herinaratra dia efa mialoha ny fametahana azy ka ny hany fantsona hafa ilaina ihany koa dia mamoy ny taribidina ao anatin'ilay tariby matevina.
Outdoor Lighting Driver 80W Flicker maimaimpoana 24V Contact Now
Fiara nitondra hazavana mitondra hazavana 200W Contact Now
IP67 Constant Current LED Driver mit Optiaonal Dimming Contact Now
LED Street Lighting Waterproof Driver 36W Contact Now